တရုတ်နိုင်ငံ Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်မှူးများက ပထမဆုံးအာကာသယာဉ်ပြင်ပ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသယာဉ်မှူးများက အာကာသယာဉ်ပြင်ပ၌ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း(EVAs) လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့ ၊ ပေကျင်းအာကာသထိန်းချုပ်ရေးစင်တာရှိ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်မှတစ်ဆင့် မြင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးများဖြစ်ကြသော ကျိုက်ကျစ်ကန်း(Zhai Zhigang) နှင့် ဝမ်ရာဖိန်(Wang Yaping) တို့သည် ၎င်းတို့၏ အာကာသယာဉ်ပြင်ပလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း(EVAs) ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အာကာသစခန်း ပင်မခန်း Tianhe ထဲသို့ အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံလူလိုက်ပါအာကာသအေဂျင်စီ (CMSA) က ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသစခန်းတည်ဆောက်မှု ခရီးစဉ်အတွင်း တတိယမြောက် အာကာသယာဉ် ပြင်ပလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နှင့် Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်မှူး၏ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ယင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသမီးအာကာသယာဉ်မှူး တစ်ဦးက တရုတ် အာကာသသမိုင်းကြောင်းတွင် အာကာသယာဉ်ပြင်ပ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း (EVAs ) တွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်း ၊ EVAs လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြီးပြည့်စွာအောင်မြင်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အေဂျင်စီက ထုတ်ဖော်ကြေညာစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အာကာသယာဉ်မှူးနှစ်ဦးသည် အာကာယာဉ်ပြင်ပ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ကြာချိန် ၆.၅ နာရီဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပေကျင်းဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁ နာရီ ၁၆ မိနစ်တွင် ပင်မခန်း Tianhe ထဲသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အာကာသယာဉ်ပြင်ပလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ဆိုသည်။
ယင်းခရီးစဉ်သည် တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးများ နှင့် စက်မှုနည်းပညာရပ်အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် EVAs ဆောင်ရွက်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အသုံးဝင်မှု ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို အာကာသယာဉ်ပြင်ပ အာကာသလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မျိုးဆက်သစ်၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာများကို စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း CMSA က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရန် အာကာသယာဉ်မှူး ၃ ဦးလိုက်ပါသွားသည့် ၆ လကြာ အာကာသခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်က Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်ကို လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 8 (Xinhua) — Taikonauts Zhai Zhigang and Wang Yaping have completed their extravehicular activities (EVAs) and returned to the space station core module Tianhe, the China Manned Space Agency (CMSA) said on early hours of Monday.
The event was the third extravehicular mission conducted during the construction of the country’s space station and the first by the Shenzhou-13 crew. It also marks the first EVAs in Chinese space history involvingafemale taikonaut, said the agency, which has declared Monday’s EVAsacomplete success.
Photos- Screen image taken at Beijing Aerospace Control Center on Nov. 7, 2021 shows Chinese taikonauts conducting extravehicular activities (EVAs) out of the space station core module Tianhe.